आज चन्द्रग्रहण लाग्दै तर बार्नु पर्छ की पर्दैन ? - jagritikhabar.com
आज चन्द्रग्रहण लाग्दै तर बार्नु पर्छ की पर्दैन ?
कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । नेपाली समयानुसार दिउँसो १.०३ बजेदेखि लाग्ने चन्द्रग्रहण अपराह्न ४.३२ बजेसम्म देखिने जनाइएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार नेपाली आकाशबाट ग्रहण नदेखिने हुनाले ग्रहण बार्नु पर्दैन ।
आंशिकरूपमा लाग्ने र नेपाली आकाशबाट नदेखिने भएकाले समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा यसबारे उल्लेख नभएको सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।